Heverina fa ny Virus dia mampiova ny fofon-katsembohana, ka nozarina ireto alika ireto hifofona ny hatsembohan'olona tratran'ny Covid-19, ary nampianarina ahay anavaka an'izany fofona izany amin'ny an'olona tsy voa. Herinandro dia efa voahofana ireto alika ireto, ary herinandro hafa no anamarinana ny vokatra azo.
Miara-miasa amin'ny dokotera sy veterinera ireto pompier de Paris ireto, ary mitohy ny fanandramana.
Hoy ny lehibeny hoe, tsy misy fatiantoka ny manandrana, ka rehefa tsy mety dia tsy olana, hatreto milaza izy fa misy ny dingana vita.
Manamora ny fitiliana io, satria azo entina eny rehetra eny ny alika, indrindra fa ny centre commercial, ny tsena, ny serana-tsambo, seranam-piaramanidina, ny seranan-damasinina na ireo toerana be olona.